qabiil ka ugu wasmada jecel | Gaaloos.com
Home » galmada » qabiil ka ugu wasmada jecel
qabiil ka ugu wasmada jecel
Todobaadkiiba mar ayay Shabakada Hablaha Media Network HMN soo bandhigtaa barnaamijka taxanaha ah ee Weydii Dhaqtaka, kaas oo ka jawaaba su’aalaha la xiriira arrimaha caafimaadka, mashruucan ayaa waxaa iska kaashada Hablaha.com iyo dhaqaatiir aqoon durugsan u leh caafimaadka, kuwaas oo kaa haqaab tiri doona baahidaada caafimaad.
Su’aalaha aan u bandhigno dhaqaatiirta ayaa badanaa waxa ay ka yimaada bulshadeena ku taxan bogga Hablaha.com, iyagoo noo soo marsiiyo E-mail-keena ahhablahamedia@gmail.com. hadaba su’aashan soo socoto ayaa waxa ay ka timid mid ka mid ah Aqristayaasheena.
Doctor waxaan Qorsheynayay in aan guursado sxbkeey. laakin gadaal ayaan waxaan ka ogaaday in sxbkeey ”Malab yarowgiisa” uu aad u yar yahay, marka uu kacsadana cabirkiisu uu yahay 7cm, ma sameeyn karaa Gus cabirkiisu intaa yahay xiriir galmo? oo maxaan kala kulmi karaa oo dhibaato ah haddii aan guursado ninka Cabirkaasi Leh?
Title: qabiil ka ugu wasmada jecel